nnukwu ụlọ nzukọ>
Nnukwu ụlọ nzukọ nwere ike ịsị na ọ bụ isi nke Aprico.Na ngụkọta nke 1477 oche na-agbasa na a nnukwu ohere gbara ya gburugburu na-ekpo ọkụ nke osisi.
Nwere ike ịnwe obi ịrapara ụda ahụ ebe niile, gụnyere ngosiputa okwu na-ejegharị ejegharị nke na-ebute ụda nke ụda olu na oche ndị na-ege ntị.
N'ihu ebe a: ákwà ngebichi "Abụ nke Shinki" nke Ryuko Kawabata
Ozo sitere na nd i na-ege nt i: Site n 'uda uda ah u
Na aka uwe na leta
N'ozuzu ọha na-ege ntị oche: Site ogbo n'akụkụ
Ndepụta akụrụngwa ọkụ
Ndepụta ngwa ọdịyo
(Na-eji procenium ibughari)
Aka uwe dị mma 10m
Aka uwe ala 12m Njem igwe na-egosipụta
idebe ákwà mgbochi *
Opera ákwà mgbochi *
Nwa oge ifuru
Nwa oge Noh ogbo
* Enweghi ike iji ya mgbe eji ihe ngosi.
Dimming okirikiri 3kw x 344 sekit maka ogbo ahụ
6kw x 12 sekit maka oche, 3kw x 4 sekit
Lighting console (Panasonic Pacolith gbaa) Atọrọ fader 120ch
Manual 3-ogbo 2,000 idaha ebe nchekwa
(Nwere n'efu mgbe ejiri ya dị ka ọkụ ọkụ, mana ebubo mgbe ejiri ya dị ka ọkụ ọkụ) 3 ogidi
ọkụ ụlọ 2 ogidi
Suspension ìhè (akwa ụdị) 4 ogidi
Ìhè Proscenium 2 ogidi
Tomental Chakwasa ihie 1 setịpụrụ
Oke Horizon Troar Horizont Light 1 ahiri 1 ahiri
Lightkwụ ìhè 8 nkeji x 5 agba
N'ihu ihu ìhè 60w 12 ọkụ / 3 sekit 14
(Enwere ike iji ya mgbe ị na-eji octopus)
Center pin Chakwasa ihie
(Achọrọ onye ọrụ iji ya.) 2kw xenon x 4
Ngwakọta igwe (YAMAHA CL-3) Ntinye: Monaural 64ch
Mmepụta: Gwakọta bọs 24
igwe okwu ikuku 800MHz (B ugboro ole) x 6ch
3-ebe nghọta ngwaọrụ okwu
Ọkà okwu Proscenium (L / C / R)
Onye na-ekwu okwu n'akụkụ (L / R)
N'ikwu okwu n'ihu
Ọkà okwu N'uko
Ogwe oriri nnabata 6
12 ogologo tebụl
Ogwe ozi 3 (A4 size, B9 size, wdg)
3 ihuenyo atọ
N'ebe nnabata map
E wepụrụ oche iri dị n'ahịrị nke 14, 2-11, maka oche ọlụsị.
Onye nhazi ahụ bụ ọrụ maka ịwụnye na iweghachi oche. (Ọ na-ewe ihe dị ka nkeji 4 ka mmadụ 20 rụọ ọrụ.)
Mgbe ị na-etinye ndị ọkà okwu na-adịru nwa oge, ụfọdụ oche ndị na-ege ntị nwere ike bụrụ ndị na-agaghị arụ ọrụ.
Biko kpachara anya mgbe ị na-edebe oche.
Banye na oche ndị na-ege ntị na nnukwu ụlọ nzukọ na-esite na XNUMXnd n'ala.Biko debe nnabata na ala nke abụọ.
A na-etinye eriri magnet (*) n'ime nnukwu ụlọ nzukọ ahụ.
Iji jiri akuku magnetik, ị ga-achọ ngwa ọdịyo agbakwunyere.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nhazi chọrọ iji ya, biko tinye tupu oge eruo.
* Supportnụ nkwado usoro n'ụzọ dị irè ibuga olu na ogbo ka ahịa
Usenubọk (9: 00-12: 00)
N'ehihie (13: 00-17: 00)
Abalị (18: 00-22: 00)
Allbọchị niile (9: 00-22: 00)
Nnukwu Halllọ: Naanị ọkwa
Ime ụlọ mgbakwasa mbụ pụrụ iche
1st mgbakwasa ụlọ
2st mgbakwasa ụlọ
3st mgbakwasa ụlọ
4st mgbakwasa ụlọ
5st mgbakwasa ụlọ
6st mgbakwasa ụlọ
Ngwa ego / akụrụngwa eji eme ihe eji eme ihe
Ogbo / na-ege ntị na-ese
Atụmatụ nnukwu ọnụ ụlọ
N'ozuzu akụkụ nke nnukwu ụlọ nzukọ ahụ
Nnukwu ụlọ nzukọ na-ese ihe
Banyere ime ụlọ, ime ụlọ ọrụ, wdg.
Na mgbakwunye na ime ụlọ mgbakwasa asatọ a na-akwụ ụgwọ, nnukwu ụlọ nzukọ nwere ọnụ ụlọ ndị ọrụ, ụlọ mgbakwasa ụlọ, ụlọ ndozi nhazi, ime ụlọ ịsa ahụ maka ndị na-eme ihe nkiri, akwa akwa, ime ụlọ ụmụaka maka ụlọ akwụkwọ ọta akara, yana ọnụ ụlọ enyemaka mbụ.
Maka nkọwaOzi na nnukwu ụlọ mgbakwasa ụlọ Biko lee
1st ụlọ mgbakwasa (XNUMXst Re).
Ogige ejiji nke 1th (ala ala XNUMXst)
Nnukwu ụlọ MAP
Nhazi / ime ụlọ ejiji
Lọ ndị ọrụ
Lọ nke 1 n'okpuru ala